လိင်အသုံးအနှုန်းများ | USAHello ကနေလိင်တူချစ်သူအရင်းအမြစ်များကို | USAHello
Transgender များလူများကလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း. လိင်ကလူသူတို့ကမွေးဖွားမှာပေးခဲ့သည့်ကျား, မပိုင်ကြဘူး. သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကျားကိုပြောင်းလဲဖို့ရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. အဆိုပါလိင်အသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်းကိုဖတ်ရန်နှင့်လိင်အသုံးအနှုန်းများ၏အဓိပ္ပါယ်ကိုလေ့လာသင်ယူ.
ဓာတ်ပုံ: IStock / Ranta ပုံများ
Transgender များ ကူးလိင်ကိုဆိုလို. လိင်လူတွေမကြာခဏရိုးရှင်းစွာကိုခေါ်ဖြစ်ကြသည် "trans ဆိုတဲ့။ " ဖြတ်ကျော်လူတို့သည်မိမိတို့တာဝန်ပေးအပ်လိင်မကိုက်ညီတဲ့ကျား, မပိုင်, ဒါမှမဟုတ်လိင်သူတို့နှင့်အတူမွေးဖွားခဲ့. ဥပမာ, တစ်ဦး trans ဆိုတဲ့လူကိုအခြားသူများမိန်းမကဲ့သို့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အထဲမှာ, သူကလူယောက်ျားကဲ့သို့ခံစားရ. တချို့က trans ဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ကျား, မတိုက်ဆိုင်ပါမှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိင်ကိုပြောင်းလဲဟော်မုန်းယူသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ပြီ. တချို့ကမ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, 0.6% လူမျိုး၏ trans ဆိုတဲ့များမှာ (ဒီခန့်မှန်းခြေဖြစ်ပါတယ် 1.4 လူဦးရေသန်း). ဖြတ်ကျော်လူတွေကလိင်တူချစ်သူထက်ကွဲပြားခြားနားသောအခွင့်အရေးနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ပြီ, လိင်တူချစ်သူ, ရိုးရိုးနှင့် queer ကလူ. သငျသညျသငျယူနိုငျပါတယျ Transgender များအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. ပိုမို.
ရှိပါတယ် Trans-ဖော်ရွေအရင်းအမြစ်များကို ရုံ trans ဆိုတဲ့လူများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း. လိင်တူချစ်သူများအတွက်အရင်းအမြစ်များ, လိင်တူချစ်သူ, နှင့်ရိုးရိုးလူတွေအရင်းအမြစ်များကိုအမြဲ trans ဆိုတဲ့လူတွေကိုမကူညီကြဘူး.
လိင်အသုံးအနှုန်းများ trans ဆိုတဲ့လူတို့နှင့်အတူ connection ကိုအသုံးပြုကြသည်စကားလုံးတွေကိုနှင့်စာပိုဒ်တိုများဖြစ်ကြသည်. သူတို့ဟာ trans ဆိုတဲ့လူတွေကိုလေးစားမှုပြသသောအသုံးအနှုန်းများဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကိုဖယ်ထုတ်ပါဘူး.
ကျားကြားနေသင်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကျားမအရေးသို့မဟုတ်တွေနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်မထားဘူးဆိုလိုတယ်. ဒါဟာလူတွေရဲ့လိင်သို့မဟုတ်ကျားမအကြောင်းကိုဘာမှမပြောမမူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်. ဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်. ဘာမျှမဆိုအလုပ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အခြားဖော်ပြချက်သက်ဆိုင် (ဥပမာ, salesperson အစား ကုန်ရောင်းသူ သို့မဟုတ် ကုန်ရောင်းသူ).
တစ်ဦးကနာမ်စားသင်အသုံးပြုတဲ့စကားလုံးအစားတစ်နာမ်ဖြစ်ပါသည်. လူတွေကအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြု Pronoun ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အဘို့ကွဲပြားခြားနားကြသည်. ဖြတ်ကျော်လူတို့သည်မိမိတို့ကျားမသတ်မှတ်ပေးရန်နာမ်စားကိုသုံးနိုင်သည်. သူတို့အမျိုးသမီးတစ်ဦးအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်လိုလျှင်, သူတို့ရဲ့နာမ်စားများမှာ သူမ နှင့် သူမ. သူတို့ရဲ့ကျား, မတစ်ဦးသည်လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သူတို့ကိုသုံးပါ သူ သို့မဟုတ် သူ၏.
Trans-ဖော်ရွေတစ်ခုခုထောက်ခံသည်သို့မဟုတ်လိင်ကလူကိုကြိုဆိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်, အုပ်စုတစု, နေရာတစ်နေရာ, အခြားသူသို့မဟုတ်ဘာမှမ.
တယောက်ကိုတယောက်အခြေအနေမှပြောင်းလဲရန်ဖို့နည်းလမ်းပြောင်းလဲရန်. trans ဆိုတဲ့လူများအတွက်, သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုက်ညီမယ့်ကျားမမှမွေးဖွားလိင်ကနေအပြောင်းအလဲကိုလုပ်ဖက်ပြောင်းနည်းလမ်းများ.
Unisex ကိုမဆိုလိင်များအတွက်သင့်လျော်သောအရာတစ်ခုခုကိုဆိုလိုသည်, ကျားသို့မဟုတ်မ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးရေချိုးခန်းအပေါ်တစ်ဦး unisex နိမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ,. ဆိုလိုသည်မှာမည်သူမဆိုအသုံးပွုနိုငျခွငျးကိုဆိုလိုသ.
Cisgender သူတို့မွေးဖွားမှာပေးခဲ့သည့်ကျား, မအတူဖော်ထုတ်ရန်သူတစ်လူတို့အဘို့စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်.
Transgender များအခွင့်အရေးနှင့် ID ကို
GLAAD မီဒီယာကိုးကားစရာလမ်းညွှန် - လိင်ပြောင်း